Su'aalaha La Weydiiyo - Hangzhou Viewsheen Technology Co., Ltd.
Qiimaheena waa isbadali karaan iyadoo kuxiran sahayda iyo sababaha kale ee suuqa. Waxaan kuu soo diri doonnaa liis qiimeyn casriyeysan ka dib shirkaddaada nala soo xiriir si aad macluumaad dheeraad ah u hesho.Waxaan ku siineynaa taageerada qiimaha tartanka.
Maya, ma lihin amar ugu yar.
Si kasta oo ay u badan yihiin, waxaan kuu soo bandhigi doonaa taageero farsamo.
Haa, waxaan ku bixin karnaa dukumiintiyada badankood oo ay ku jiraan borotokoolka isgaarsiinta, dukumintiga qaab dhismeedka, hagaha adeegsiga.
Waxaan dammaanad ka qaadnaa tikniyoolajiyadeena, agabkeenna iyo wax soo saarkeenna. Balanteenu waa qanacsanaantaada alaabtayada. Dammaanad ama maya, waa dhaqanka shirkadeena inay wax ka qabato oo ay xalliso dhammaan arrimaha macaamiisha si qof walba ugu qanco
Haa, waxaan had iyo jeer isticmaalnaa baakadaha dhoofinta oo tayo sare leh. Baakadaha takhasuska leh iyo shuruudaha xirxirida aan caadiga ahayn ayaa laga yaabaa inay qaadaan lacag dheeraad ah.